बालुवा र बालुवाटार - परिहास - नेपाल
“साला, एकदमै गलत व्यापारको काममा लागेको रहेछु ।” मुठ्ठो जुंगा भएका व्यापारीले भने । उनको अनुहारभरि दिक्दारै दिक्दारका रेखा कोलकाताको रेल मार्गजस्तै बेहिसाब कोरिएका थिए ।
“त्यस्तो के पो भएको छ र दादा ? हाम्रो त के बिग्रेको छ र ?” सँगै बसेका सिंकुटीले भने ।
“नबिग्रे पनि मौका त ठूलै गुम्यो नि । टेन्सन त त्यो पो हो ।” उनको दिक्दारवाला लिकमा रेल पनि कुदेजस्तो देखियो ।
वार्तामा संलग्न दुवै राजधानीका विभिन्न खोलाबाट बालुवा निकालेर बेच्ने व्यापारी हुन् । उनीहरु बालुवा व्यापारमा लागेको पनि धेरै भइसक्यो । अब काठमाडौँमा उनीहरुले बालुवा ननिकालेको खोलै छैन भन्दा हुन्छ । तर यत्रो वर्षपछि आएर ती बालुवा व्यापारीलाई पछुतोजस्तो लागिरहेको छ । किन ?
जुंगेले अघिकै मुद्रामा भने, “हेर भाइ, यत्रो वर्ष यो बालुवा बेच्ने काम गरेँ, केही हात लागेन । बालुवाको ठाउँमा बरु बालुवाटार बेच्ने काम गरेको भए धेरै फाइदा हुने रहेछ । साला, अहिले आएर पो थाहा भयो ।”
“हैन दादा, हामी त बालुवा पो बेच्ने हौँ, बालुवाटारसँग हाम्रो के कनेक्सन ?” सिंकुटी बुझ्न खोज्दैछन् ।
“अरे भाइ, हाम्रा लागि बालुवा के, बालुवाटार के, दुवै एउटै त हो नि । दुवै बेच्न मिल्ने रहेछ । फरक यति मात्रै हो, बालुवा बेच्नेको इज्जत हुँदैन, बालुवाटार बेच्नेको ठूलो इज्जत हुन्छ । बालुवा बेच्नेलाई पुलिसले पनि सहँदैन । तर बालुवाटार बेच्नेलाई सरकारले समेत बचाउ गर्छ । वास्तवमा हामीले पहिले नै बालुवाको सट्टा बालुवाटार बेच्ने काम गर्नुपर्ने रहेछ । बडो गल्ती भएछ ।”
उनी पुनः घोर निराशामा प्रवेश गरे ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले हालै मात्र खुलामञ्चका टहरा भत्काएछ । टहरा बनाएकामा जति पनि मान्छे आक्रोशित थिए, भत्काएपछि ती जम्मै खुसीमा परिणत भए । वास्तवमा मान्छेलाई खुसी पार्न केही न केहीचाहिँ भत्काइरहनै पर्ने रहेछ ।
खुलामञ्चका टहरा भत्किए । त्यो राम्रै भो । अब महानगरपालिकाले भत्काउनुपर्ने अर्को टुँडिखेलको टहरा हो । काठमाडौँमा दुइटा टुँडिखेल छन् । एउटा सानो, अर्को ठूलो । ठूलो टुँडिखेल यतिबेला पूरै धरहराको माटोले भरिएको छ । सानो टुँडिखेलचाहिँ टहरै टहराले भरिएको छ । अस्ति मात्रै त्यहाँ करिब साततले एउटा टहरा निर्माण भएको थियो । स्वयं सम्मानीय राष्ट्रपतिको करकमलबाट उक्त टहराको समुद्घाटन भयो । (यहाँ स्मरण गरौँ, कसैकसैले उक्त टहरा नक्साविपरीत निर्माण भएको भन्ने आरोप पनि लगाएका छन् । तर त्यो पूरै झुटो हो । किनभने त्यो टहरो ‘नक्साविपरीत’ होइन, ‘नक्साबिना’ बनाइएको हो । नक्साबिना बनाइएको टहरालाई नक्साविपरीत’ भन्ने झुटो आरोप लगाउन मिल्दैन । अब जुन टहराको नक्सा नै छैन, त्यो नक्साविपरीत भयो कि अनुरुप भयो भन्ने प्रश्न पनि आएन ।)
सानो टुँडिखेलमा अरु पनि स–साना टहरा थुप्रै बनेका छन् । तीमध्ये कुनै टहरामा भोजसोज खुवाउने काम हुन्छ । कुनैमा किताब पढ्ने काम हुन्छ । कुनैमा फुटबल–सुटबल खेलाउने काम हुन्छ । टहरोमा सटर मात्र छैन, काम भने पूरै व्यापारिक छ ।
खुलामञ्चजस्तै सानो टुँडिखेल पनि खुला ठाउँ नै हो । खुलामञ्च खुला गर भनेजस्तै ‘सानो टुँडिखेल खुला गर’ भन्ने दिनचाहिँ कहिले आउला हँ ?